ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်နီကိုတီနိုက်မွန်နွန်ကူလိုotide (NMN) လိုအပ်သည်။
အိုမင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်းအိုမင်းခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည် Nicotinamide Mononucleotide (NMN)။ ရင့်ကျက်သောအိုမင်းခြင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်လူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ NMN ကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းများရှိသည်။
ဒီဒြပ်ပေါင်းဟာအိုမင်းခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိကောင်းသိလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ သေနတ်များကိုကိုင်ထားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသင်ကို nikotinamide mononucleotide အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူပြီးဖြစ်သည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သည် NAD + ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ NAD + သည်လူ့ဆဲလ်တွင်အရေးပါသောဇီဝကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှဤဓာတုဗေဒသည်အင်ဇိုင်းများစွာလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ကြောင့်ကျဆင်းသွားပါသည်။ ထို့အပြင်စားသုံးမှုနှုန်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာနှင့်သွယ်ဝိုက်။ သာဖြစ်သည်။
မှတ်သားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ၊ အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောကုသမှုအများစုနှင့်မတူဘဲသင့်အားအားနည်းသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ချန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ NMN ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ တရားမဝင်သောမှလာမယ့်ဖြစ်ကြသည်။ NMN သည်သင်၏သက်တမ်းကိုမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်အားအလင်းအနည်းငယ်ပေးပါ။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ဆိုတာဘာလဲ
Nicotinamide Mononucleotide (Nmn) အမှုန့် (1094-61-7) niacin ကနေဆင်းသက်လာ။ ၎င်းသည် nikotinamide ribose နှင့်ဖော့စဖိတ်အုပ်စုတို့၏တုံ့ပြန်မှုမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းသည်ဆယ်လူလာဇီဝဓါတုဗေဒလုပ်ဆောင်မှုများတွင်အခြေခံကျသည့် NAD + (nikotinamide adenine dinucleotide) ၏ biosynthesis တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
NAD + ၏ပေါင်းစပ်မှုတွင်နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်ကူလိုတိုက်အမြောက်အများအမှုန့်သည်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide adenylyltransferase အတွက်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NAD + သို့ပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းဖြစ်သည်။
NMN လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆယ်လူလာစွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NAD + ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သောကြောင့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု၏ကျဆင်းခြင်းသည်အခြားတစ်ခုသို့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မည်။
မကြာသေးမီက preclinical လေ့လာမှုများမှာ, Nicotinamide Mononucleotide ဟာကုထုံးဒိုမိန်းအတွင်းအနှစ်သာရ၏အတည်ပြုခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းဒြပ်ပေါင်း၏သက်ကြီးရွယ်အိုများအားအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးရာတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ofကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကနီကိုတင်းနိုက် mononucleotide ကင်ဆာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလားအလာရှိသောသုတေသနပြုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစားအစာများတွင်ပါဝင်သောအရာ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Wisepower သည် NMN နှင့် NR အမှုန့်များ၏အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားသည် ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
အသက်ကြီးခြင်းနှင့်မီးခိုးရောင်ဆံပင်သည်ဥာဏ်ပညာနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့်သင်သဘောတူလိမ့်မည်။ သို့သော်အကြီးတန်းအချိန်လေးများကိုသင်စတင်ရချိန်တွင်ဤအမြင့်ဆုံးပျော်ရွှင်မှုသည်ခဏသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်များအတွင်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရောဂါများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အိုမင်းခြင်းကဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သာဓကအားဖြင့် NAD + နှင့် Nicotinamide Mononucleotide ပမာဏသည်ရွှေနှစ်များအတွင်းကျဆင်းသွားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာတုဗေဒဓာတ်အားဆဲဆဲဖြစ်သော်လည်းစားသုံးမှုနှုန်းသည်အသစ်တဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မှုထက်များစွာသာလွန်သည်။
DNA ပျက်စီးမှုဖြစ်လျှင် NAD + သည်သက်ရောက်မှုရှိသော organelles ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် DNA-repair ပရိုတိန်းဖြစ်သော PARP1 ကိုသက်ဝင်စေသည်။
NMN လျော့နည်းခြင်းသည် NAD + အဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် mitochondria မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုကျဆင်းစေသည်။
Havard တက္ကသိုလ်မှမျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်ဒေါက်တာ Sinclair မှသုတေသနပြုချက်အရအိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးစေသည့်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide ဖြည့်စွက်မှု၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုသည်။ အဆိုပါပညာရှင်ကသူနှင့်သူ့အဖေသည်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်နေကြောင်းဝန်ခံပြီး၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသူတို့၏စိတ်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
ဆီးချိုရောဂါ II ကိုကုသ
nikotinamide adenine dinucleotide ပမာဏလျော့ကျခြင်းသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
Nicotinamide Mononucleotide ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်ဂလူးကို့စ်ကိုသည်းမခံနိုင်မှုနှင့်အင်ဆူလင်အာရုံခံစားမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်များကကုသမှုသည်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကြောင့်ဖြစ်သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဖော်ပြချက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
nikotinamide adenine dinucleotide နိမ့်ကျသောအခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
NMN ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်ပမာဏကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည် NAD +ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် Nicotinamide Mononucleotide ဟာအာရုံခံလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ သင်ယူခြင်းနဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေအပါအ ၀ င်အာရုံခံလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအကျိုးပြုပါတယ်။
အထက်ပါများအတွက်အချို့သောလေ့လာမှုဘောက်ချာ nicotinamide mononucleotide အကျိုးခံစားခွင့် ဤဖြည့်စွက်ဆေးသည် intracerebral ħsaraကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်။ သုတေသီများသည်ကြွက်ဟောင်းများကိုထိုးသွင်းသောအခါ NAC + ၏ ဦး နှောက်အကျိတ်များထုတ်လုပ်မှုတွင်များစွာတိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာလေဖြတ်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောင်ရမ်းခြင်းများကိုနောက်ဆက်တွဲလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအကောင်းဆုံး NMN အဆင့်သည်စွမ်းအင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ DNA ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုတုန့်ပြန်သော NAD + တိုးများလာသည်။ ကတည်းက Nicotinamide Mononucleotide ဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ယင်း၏ချို့တဲ့ခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ အသည်းအသည်းနှင့် dyslipidemia ကဲ့သို့သောဇီဝဖြစ်စဉ်အခြေအနေများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဂလူးကို့စ်သည်းမခံသောအမှု၌ NMN သည်သကြားဓာတ်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
NMN ကိုသောက်လျှင်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်၏ ၁၀% အထိဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းသုတေသနကဆိုသည်။ ဒေါက်တာ Sinclair ပြောသည့်အတိုင်းလူများအတွက် NMN သောက်သုံးသောပမာဏတစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် treadmill ပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်တူညီသည်။
မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများနှင့်မျက်နှာခွဲစိတ်ကုသမှုများအကြောင်းကိုမေ့ ထား၍ မရရှိနိုင်သည့်ရလဒ်ကောင်းများထွက်ပေါ်စေသည်။
အဓိကအားဖြင့်နုပျိုမှုကိုငယ်သောအရွယ်နှင့်ခွဲခြားထားခြင်းသည်ခွန်အားနှင့်ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုများရှိသော်လည်းဤစနစ်များအတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုလျော့ကျသွားချိန်တွင် senescence သည်အလေးသာမှုများကိုတားဆီးပြီးကြွက်သားတစ်သျှူးများအားနည်းလာသည်။
ငါ့ကိုသိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်ကနေရှင်းပြဖို့ခွင့်ပြုပါ။ လူ့ endothelial cells ဆဲလ် Sirtuin1 ပရိုတိန်းတွေကျဆင်းသွားတဲ့အခါသွေးစီးဆင်းမှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်။ NMN သည် SIRT1 ၏အဓိကထိန်းညှိသူဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဖြည့်စွက်မှုအားစီမံခြင်းအားဖြင့် sirtuin-signaling ကိုသက်ဝင်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများနှင့်အခြားအရေးပါသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသို့အောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရများကိုထောက်ပံ့ရန်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောအသစ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide နှင့် riboside သည်မည်သို့ရှိသနည်း။
ကောင်းပြီ၊ နှစ်ခုလုံးသည် NAD + ၏ရှေ့ပြေးများဖြစ်သည်။
၄ င်းတို့၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံများအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NMN သည် NR ထက်မော်လီကျူးအရွယ်အစားပိုကြီးကြောင်းသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုင်း ၎င်းသည်၎င်း၏မော်လီကျူးတစ်ခုလုံးကိုဖြိုခွဲရန်မလိုဘဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုကဓာတုဗေဒအစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိကြောင်းအတည်ပြုသောအခါမျှော်လင့်ချက်တစေ့တစောင်းရှိပါသည်။ NMN ကို nikotinamide adenine dinucleotide အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် Scl12a8 ပရိုတိန်းကိုသိပ္ပံပညာရှင်အချို့မတွေ့မချင်းအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများကဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုတားဆီးခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူအများစုသည် nikotinamide mononucleotide စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏ riboside counterpart ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သုတေသန
မြောက်မြားစွာသောသုတေသနလေ့လာမှုများနှင့်ပြင်းထန်သောရှိပါတယ်ပေမယ့် NMN ဖြည့်စွက်သုံးသပ်ချက် ၁၉၆၃ ခုနှစ်ကသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကမှတ်သားလောက်တဲ့ပရောဂျက်တွေအကြောင်းပြောခွင့်ပြုပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ဒေါက်တာ Sinclair သည်လေ့လာမှုတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည် Nicotinamide Mononucleotide ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် anti- အိုမင်းခြင်းဖြည့်စွက်အဖြစ်၎င်း၏အခန်းကဏ္။ ။ သူ၏သုတေသနစာတမ်းတွင်မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်သည်ကြွက်များ၏မော်ဒယ်များ၏ကြွက်သားစွမ်းရည်နှင့်ဇီဝြဖစ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Sinclair က NMN ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတွက်ထုတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
သုတေသနမှတစ်ဆင့်ဤဟားဗတ်မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်သည် NMN ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုထပ်မံမမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
NMN ၏နှလုံး - အကာအကွယ်အခန်းကဏ္။
၂၀၁၄ ခုနှစ် NMN ၏သုတေသနတွင် Yamamoto နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် NMN တွင်နှလုံးရောဂါကာကွယ်သည့်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်စာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်နှလုံးကိုထိတွေ့ခြင်းနှင့်သွေးအားနည်းခြင်းတို့မှကာကွယ်ပေးသည်။
နောက်နှစ်နှစ်အကြာတွင် De Picciotto နှင့်သူ၏မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်များသည် NMN သည်သွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
NMN သည် Neurodegeneration ကိုတိုက်ဖျက်သည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Long နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် NMN ဖြည့်စွက်မှုသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကုသနိုင်ပြီးအနှုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ဝမ်နှင့်သူ၏သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့သည်ကုသမှုသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းမှုများကိုတန်ပြန်လိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
နောက်နှစ်များတွင် NMN ၏ဖြည့်စွက်သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များသည်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်ကူလိုotide၏ထိရောက်မှုကိုထောက်ခံရန်လာခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Mills နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် nicotinamide mononucleotide (NMN) သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုစီမံနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည်ဖြည့်စွက်စာသည်ကြွက်ဟောင်းများတွင်ဇီဝကမ္မနှင့်ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုကိုတွက်ချက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၌ပင် Mills သည်သွေးကြောနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတွင် ၄ င်း၏အခန်းကဏ္ affects အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုလေ့လာရန် Mills သည် Yoshino နှင့် Imai နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
NMN လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Transporter
Imai နှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒပညာရှင်များအဖွဲ့သည်နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်ကူလိုotideကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့သွတ်သွင်းပေးသည့် Slc12a8 ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်လျင်မြန်ပြီး NMN ၏ဇီဝရနိုင်မှုကိုအနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ Keio (တိုကျို) နှင့်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်များမှပညာရှင်များသည်အသက်ကြီးသော်လည်းကျန်းမာသောဘာသာရပ်များအကြား NMN ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။
ဤလူ့စမ်းသပ်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနီကိုတင်းနိုက် mononucleotide ၏လုံခြုံမှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် beta-ဆဲလ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များရှိမရှိရှိမရှိသိရှိလိုကြပြီ NMN သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြည့်စွက်ပေးသည်.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သောက်သုံးသော
သင်၏စိတ်ထဲမှတစ်ဆင့်ပြေးနေသောမေးခွန်းမှာ NMN ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လောက်ယူသင့်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ မင်းအဲဒါကိုဖျက်လိုက်မယ်။
လူသားများအတွက်ပုံမှန် NMN သောက်သုံးခြင်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၅ မီလီဂရမ်နှင့် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင်တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး ၂၅၀ မီလီဂရမ်သောက်ရမည်။
သူသည်တစ်နေ့လျှင် NMN ၇၅၀ မီလီဂရမ်ခန့်သောက်သည်ဟုဒေါက်တာစင်လင်းကဝန်ခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်း NMN ဖြည့်စွက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ပါကအသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိတက်နိုင်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ nicotinamide mononucleotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမသိသောမှတ်တမ်းများမရှိသော်လည်းသင်တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးထိုးသင့်သည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သည်ဘေးကင်းပါသည်
ယခုအချိန်အထိ Nicotinamide Mononucleotide ကိုအန္တရာယ်မကင်းဟုအပြစ်တင်ရန်အချက်အလက်များမရှိပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့သောမှတ်တမ်းများမှမည်သည့်ဘာသာရပ်သည်မျှပြင်းထန်သောနီကိုတင်းနိုက် mononucleotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ preclinical လေ့လာမှုများမဆိုဆိုးရွားသောလက္ခဏာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိဘဲအောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်ဒါ့အပြင်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ဖြည့်စွက်
nicotinamide mononucleotide သည် FDA မှထောက်ခံချက်အပြည့်အစုံမရရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်ဆေးညွှန်းဆိုင်ရာဆေးဝါးမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်သင်ကအဖြစ်ယူနိုင်သည် အစားအသောက်ဖြည့်စွက်.
၎င်းကိုဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးဆိုင်များ၌သင်တွေ့နိုင်သော်လည်း၊ ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာအွန်လိုင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏သုတေသနအတွက်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှုအတွက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်သင်တရားဝင် beta-nikotinamide mononucleotide ပေးသွင်းသူထံမှစျေး ၀ ယ်နေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
FDA စံနှုန်းများအရလူတစ် ဦး သည်အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၅၆၀ မီလီဂရမ်နီကိုနိုက်ကလိုဒိုက်လိုအပ်သည်။ သင်သိသင့်သည်မှာပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်သည်အခြားအစားအစာများနှင့်သစ်သီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်ဆုံး NMN ကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၏ဓာတု 0.25mg နှင့် 1.12mg အကြားပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကျန်းမာသောအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး FDA ၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာလိုပါကတစ်နေ့လျှင်ပေါင် ၁၅၀၀ ပေါင်ကိုစားသုံးရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင် beta-nikotinamide mononucleotide ပေးသွင်းသူထံမှဖြည့်စွက်ဝယ်ယူမှုကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
Yao, Z. , et al ။ (2017) ။ Nicotinamide Mononucleotide သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုပြောင်းပြန်အဖြစ် JNK ကိုတားမြစ်သည်.
Yoshino, ဂျေ, et al ။ (2011) ။ Nicotinamide Mononucleotide, အဓိက NAD (+) အလယ်အလတ်, ကြွက်များတွင်အစားအသောက်များ၏ရောဂါဗေဒနှင့်အသက် - သွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါကုသ။ cell ဇီဝြဖစ်။
et al Yamamoto, တီ။ (2014) ။ NAD + Synthesis ၏အလယ်အလတ်ဖြစ်သော Nikotinamide Mononucleotide သည်နှလုံးကို Ischemia နှင့် Reperfusion မှကာကွယ်ပေးသည်။
ဝမ်, Y. , et al ။ (2018) ။ NAD + ဖြည့်စွက်မှုသည် AD Mouse မော်ဒယ်လ်အသစ်တွင်မိတ်ဆက်ထားသော DNA ပြုပြင်ခြင်းချို့တဲ့မှုဖြင့် Key Alzheimer ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် DNA ပျက်စီးမှုတုန့်ပြန်မှုများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။
Keisuke, O. , et al ။ (2019) ။ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမမှန်အတွက်ပြောင်းလဲ NAD ဇီဝြဖစ်၏သက်ရောက်မှု။ ဇီဝဆေးပညာသိပ္ပံဂျာနယ်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်နီကိုတင်မင်နီ Monucucleotide (NMN) လိုအပ်သည်။
၂။ နီကိုတီနိုက်မိုင်နိုနူကူလိုotide (NMN) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၃။ ဘာအစားအစာများတွင်ပါဝင်သည် Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
၄။ နီကိုတီနိုက်မီနွန်နူကူလွိုက်တိုက် (NMN) ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
5.NMN VR NR
6.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သုတေသန
7.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သောက်သုံးသော
8.Is Nicotinamide Mononucleotide (NMN) လုံခြုံသည်
9.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ဖြည့်စွက်
L-Ergothioneine (EGT) - ကုထုံးနှင့်ဆိုင်သောအလားအလာရှိသောအစားအစာ ‐ ထုတ်လုပ်ထားသော Antioxidant